क्वारेन्टिनमा १२ वर्ष कान्छा अर्जुनसँग सँगै बसेकी छन् मलाईका, ‘बुढी’ भनेर कमेन्ट गर्नेलाई मलाइकाले दिइन् मुखभरीको जवाफ…. – SUDUR MEDIA
December 27, 2020 AdminLeaveaComment on क्वारेन्टिनमा १२ वर्ष कान्छा अर्जुनसँग सँगै बसेकी छन् मलाईका, ‘बुढी’ भनेर कमेन्ट गर्नेलाई मलाइकाले दिइन् मुखभरीको जवाफ….
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अक्सर अभिनेता अर्जुन कपूरसँगको सम्बन्धका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । अरबाजबाट सम्बन्ध विच्छेद भएदेखि नै मलाइका अर्जुनसँग समय बिताइरहेको देखिन्छ। यद्यपि दुवैले धेरै वर्षसम्म आफ्नो सम्बन्धको बारेमा खुलाएका थिएनन् । वर्ष २०१८ मा दुबैले आफ्नो सम्बन्धलाई पहिलो पटक स्वीकार गरेका थिए । अर्जुन र मलाइका खुल्लम खुल्ला आफ्नो प्रेम व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ। हालसालै, मलाइकाले यस सम्बन्धको बारेमा अर्को ठूलो खुलासा गरेकी छन्।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, लकडाउनको क्रममा सबैलाई उनीहरूको घरमा बन्द रहन बाध्य पारियो। यस्तो अवस्थामा अर्जुन कपूर पनि उनीसँगै मलाइकाको फ्ल्याटमा सरेका थिए । कर्फ्यूको दिनमा मलाइका र अर्जुन घरको बालकनीमा सँगै थिए। अब मलाइका आफैंले यो कुरा पुष्टि गरीन् कि उनी अर्जुनसँगै क्वारेन्टाइनमा बस्छिन्।
सेप्टेम्बर महिनामा अर्जुन कपूरलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो । केही समयपछि मलाइकामा पनि कोरोना देखिएको थियो । उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर धेरैले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको उमेरलाई लिएर टिप्पणी गरिन्छ । मलाईका ४७ वर्षकी भइन् भने अर्जुन ३५ वर्षका छन् । मलाइकाले यसमा पनि प्रतिकृया दिएकी छन्, जब तपाईं कसैसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने वास्तवमा उमेरको भिन्नता हुँदैन।
यसले दुई भिन्न दिमाग हृदयमा जोड्दछ। दुर्भाग्यवस हामी त्यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं जुन समयको साथ आउन अस्वीकार गर्दछ । यदि ठूला व्यक्तिले कान्छी केटीलाई माया गर्छ भने यो कुनै ठूलो कुरा होइन, तर यदि महिला एक पुरुषसँग प्रेमको सम्बन्धमा ठूलो छ भने उसले धेरै कुरा सुन्नु पर्दछ। मलाइका र अर्जुन एक अर्काको बारेमा धेरै गम्भीर छन्, यस्तो अवस्थामा प्रशंसकहरूले उनीहरूको विवाहको शुभ समाचार छिट्टै सुन्न सक्दछन्।